अमेरिकामा ट्रम्पको अनुहारै हेरेर ओली ट्वाँ ! बस्ने ठाउँ नै पाएनन् - info4nepal
अमेरिकामा ट्रम्पको अनुहारै हेरेर ओली ट्वाँ ! बस्ने ठाउँ नै पाएनन्
न्यूयोर्क – अमेरिका भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच करीब २ मिनेट कुराकानी भएको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्प तथा प्रथम महिला मेलानिय ट्रम्पले राष्ट्रसंघीय महासभाको उच्चस्तरीय छलफल हुनु अघिल्लो दिन सोमबार साँझ आयोजना गरेको स्वागत कार्यक्रममा उभिएरै छलफल भएको हो । ओलीले ट्रम्पसँगको भेटमा बस्न नै पाएनन् ।
स्वागत समारोहमा सहभागी हुने सबैसँग अमेरिकी राष्ट्रपतिले संक्षिप्त कुराकानी गर्दै फोटो खिच्ने प्रचलन छ । सबै सदस्य मुलुकका उच्चस्तरीय पाहुना आउने र छलफल हुनाले पनि यो स्वागत समारोह करीब पाँच घण्ट चल्छ ।
यही समयमा कुराकानीको मौका छोप्न ओली आफ्नो सम्बोधनभन्दा चार दिन पहिले नै न्यूयोर्क ओर्लेका हुन् ।उनीहरूबीचको संक्षिप्त कुराकानी र छलफलमा सहभागिताबारे न्युयोर्कस्थित नेपाली नियोगले जानकारी दिँदै भनेको छ , ‘७३ औं महासभामा भाग लिन न्यूयोर्क आइपुगेका विभिन्न मुलुकका राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख तथा सरकारका प्रतिनिधिको सम्मानमा गरिएको समारोहका प्रधानमन्त्री ओली र पत्नी राधिले सहभागिता जनाएका छन् ।’
संक्षिप्त समयको फाइदा उठाउँदै ओलीले नेपालको दीगो शान्ति, विकास र दुईपक्षीय उच्चस्तरको भ्रमणबारे धारणा राखेको जानकारी उनको सचिवालयले जनाएको छ । ७० औं महासभामा सुशील कोइरालाले ओबामालाई भेटेका थिए ।
त्यसपछि कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग कार्यक्रममै भएपनि भेटघाट गर्न पाएका थिएनन् । तर, ओलीसँगको भेट पनि अर्थपूर्ण नभएर औपचारिकतामै सीमित भएको छ ।
गत वर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सम्बोधन गर्ने गरी मात्र आएकाले स्वागत समारोहमा सहभागी भएनन् । उनी स्वागत समारोह सकिएको भोलिपल्ट आएका थिए । ओली भने ट्रम्पसँग फोटो खिचाउने अवसर जुराउन केही दिनअघि नै अमेरिका पुगेका हुन् ।ओलीले परिचयसँगै भएको कुराकानी करीब दुई मिनेट मात्र रहेको जानकारी दिएका हुन् । उनले ट्रम्पले गरेको शान्तिको पहलको प्रशंसासमेत गर्न भ्याए ।
गत वर्ष प्रधानमन्त्री स्वागत समारोहमा आइनपुग्ने भएपछि उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री सहभागी हुन गेट पुगे पनि नामको संयोजन हुन नसक्दा लज्जित भएर पर्कनु परेको थियो । यसपटक त्यस्तो अवस्था भने आएन । प्रधानमन्त्रीले भित्र अन्य मुलुकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखसँग पनि भेटे । उनी दुईपक्षीय सहकार्य र उच्चस्तरको भ्रमण आदन प्रदानको बारेमा छलफल गरेका बताइएको छ ।
भेटमा ओलीले ट्रम्पको अनुहार हेरेर चित्त बुझाउनुपरेको छ । अमेरिका र नेपालीबीच हुन सक्ने सहकार्य, सहयोग आदानप्रदान लगायतका विषयमा भेटमा कुराकानी हुन पाएन ।
एक जना काङ्ग्रेसि मित्रले तेरो सुर्यमा 1000 like पुरायेर देखा रे , लौन सहयोग गर्नुस, पढ्नुस मेरो कथा…..
ranjan April 20, 2018
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ज्यू ? ?
ranjan December 11, 2018
जबसम्म रास्ट्रपति या कुनै मन्त्रीको छोरी सिकार हुदैनन तबसम्म बलात्कारिलाइ यो देशमा कडा कारवाही हुदैन – मन परे शेयर अबस्य गर्नुहोस
मन्दिरको मुर्ती बेच्ने हरु हाम्रो बिचमा आयेर भन्छन हाम्रो धर्म खतरामा छ , हामी जोगाउछौ
झलनाथले खुलेरै प्रशंसा गरे कांग्रेसको, ओली र प्रचण्डलाई भनेः देउवाबाट केही सिक
प्रचण्डले बादललाइ थर्काए , आफ्नो घरबेटिलाइ केही नगर्न चेतावनी